Voina tany Mahajanga :: Zaza 7 taona novonoina sy nalevina an-tsokosoko • AoRaha
Mampivarahontsana ny zava-nisy tany an-tampon-tanànan’i Mahajanga, afak’omaly maraina. Nalevina tany Ambohimandamina ny fatin’ny zazavavikely, 7 taona. Tamin’ny fizahana no nahafantarana fa novonoina, avy eo nalevina an-tsokosoko io zaza io.
Miaraka manao ny fanadihadiana hikarohana an’izay nahavanona an’izao vono olona izao ny polisy sy ny zandary, any Mahajanga.
Nalaza tany an-toerana ity raharaha ity. Avy ao amin’ny fianakaviana iray monina ao Tsararano Nosikely i Adriana, ilay zaza novonoina sy saika nalevina tsy hitan’ny havany. Niala tao an-tranony nandeha niantsena ny reniny no tsy nahita an’io zanany vavy tokana io, rehefa tafaverina tao an-tanàna. Nantsoina antelefaonina ny fianakaviana rehetra. Velona ny fitadiavana teo an-tanàna. Nitety fokontany niantsoantso ny anaran’ilay zaza sy nanontany olona ny fianakaviana. Ora roa taorian’izay no nahitana ny razan’ ilay zazavavikely.
Nahitana faritra mangana, toy ny nokendaina ny tendany, nisy fery ny lohaliny roa. Voalaza ihany koa fa nomena poizina ity zaza ity. Tonga nanao ny fizahana ny mpitsabo avy amin’ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH) ary nandray an-tanana ny fanadihadiana avy hatrany ireo mpitandro filaminana.
« Nohenoina ny fitantaran’ ny ankizy niara-nilalao tamin’ilay ankizivavy. Nolazain’izy ireo ny fisian’ny olona naka sy nitondra an’io zaza io, raha teo am-pilalaovana iny. Olona nandalo tany Ambohimandamina kosa no nahatsikaritra tovolahy nofosana iray nihady tany sy nandevina an’ilay zaza teo amorontatatra. Azo sary io lehilahy io ka naseho an’ilay ankizy nilalao. Nohamarininy teo fa izy no olona nitondra ny namany tsy hita », araka ny tatitra azo avy ami’ny mpitandro filaminana, any Mahajanga.
Tsy mbola nahitam-bokany, hatramin’ny omaly, ny fikarohana an’io lehilahy io. Hanaovana fanadihadiana ihany koa anefa ny ray aman-dreny sy ny fianakavian’ilay zaza namoy ny ainy mba hamantarana ny mety ho ao ambadik’izao vono olona izao.
Zandary navotan’ny polisy teny Soavimasoandro